design Architectural - Digital Warshadaha Co., Ltd.
model Architectural 3D daabacaadda
Codsiga waxaa of daabacaadda 3D duurka ku naqshadda aan ku xaddidnayn guud daabacaadda 3D Architecture, laakiin sidoo kale waxaa laga codsadaa in wax soo saarka ka mid ah qaybaha oo adag, lagu daydo Ghadafi (models qorshaynta, lagu daydo jilidda tunnel dabaysha, miisaska ciid, iwm) ee barnaamijka sarrifka iyo bandhigay dibadda.
Qaabka site 3D iyo ciid daabacaadda 3D miiska
In miiska qaabka goobta iyo cammuudda 3-dimentional, dhismaha ku meel gaarka ah ee dhismayaasha xafiiska, wiish munaarad, baararka steel, yards, mashiinada, iwm lagu gacanta hagaajin karo. Qaabka Goobta mashruuca iyo design CI dheeraad ah aad maskax ahaan iyo si weyn by geeyo, qorshaynta iyo jimicsiga ee khariidad site on miiska cammuudda ah laga arki karo. Qaabka goobta 3-dimentional iyo miiska ciid sidoo kale kaa caawin karaan si ay u muujiyaan iyo horumarkii ugu dambeeyay on goobta, helo xalka ugu wanaagsan, tayadoodii qoondaynta khayraadka, si wax ku ool badbaadiyo kharashka iyo hagaajiyo tayada mashruuca. 3D daabacaadda run ahaantii waa technology yara baaluq. In mustaqbalka, 3D daabacaadda geli doono qoysaska iyo aad u badan. Waxaa laga yaabaa in aad ka daabacan kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka, alaabta iyo xataa mashiinada wax taaj oo aad u baahan tahay guriga, oo maalin maalmaha ka mid aan daabacan kartaa guriga noo gaar ah, iyo male oo dhan lagu xaqiijin doono.
qaybaha Prefabricated daabacaadda 3D
SL 3D printer talinayaa
All taxane ah taxane 3DSL of madbacadaha 3D